Miyaa lagu xadgudbay Xaawo Caad? – Idil News
Miyaa lagu xadgudbay Xaawo Caad?
Qaar ka mid ah warbaahinta caalamka ayaa shaaciyay war ku saabsan in ruqsadii wadista gaadiidka ee gudaha Australia lagala noqday haweeney Soomaali ah oo ka shaqeyn jirtay tagsi, kadib markii ay ku tuhamatay shuruucda, balse isla haweeneydan oo BBC-da la hadashay ayaa beenisay eedeymahaas.
Xaawo Faarax Caad, oo ka shaqeysa magaalada Melbourne, ayaa lagu soo warramay in laga mamnuucay kaxeynta tagaasida, arrintaas oo la sheegay inay ku muteysatay markii ay qof indhaha la’ oo gaarigeeda soo raacay weydiisay jihooyinka magaalada.
Waxaa kale oo la shaaciyay inay si khalad ah uga gudubtay calaamadaha casaanka ah ee loogu talogalay in lagu hakado isla markaana ay diidday in ay aqbasho ganaax lagu soo rogay.
Xaawo ayaa lagu dhaliilay inay tilmaan weydiisay qof aan waxba arkin, sidoo kalena aysan aqoon u lahayn aaladda casriga ah ee dadka hagta ee la yiraahdo GPS ama Google Map.
Hase yeeshee, wareysi ay siisay laanta Af-Soomaaliga ee BBC-da ayey ku beenisay dhammaan arrimahan waxayna gaashaanka ku dhufatay fadeexadda ay warbaahinta qaarkeed ka faafiyeen.
“Waligeyba ma qaadin qof indhoole ah, anigu tababarka waxaan qaatay sanadkii 2004-tii, muddo 15 sano ah ayaan shaqadan waday, cid aan wax yeelay ma jirto, cid ay wax na dhex mareenna ma jirto”, ayey tidhi Xaawo.
Iyadoo hadalkeeda sii wadata ayey Xaawo sheegtay in wax dhibaato ah oo ay geysatay aysan jirin laakiin arrimahan ay ka dambeeyaan dad ay ku tilmaamnay “inay ka maseyrsan yihiin” shaqadeeda.
“Waa dad i daba taagnaa oo ka xun baabuurkan aan wado, markii hore rag ayaan gawaarida u kaxeyn jiray laakiin 2016-kii ayaan yeeshay gaari uu magacaygu ku qoran yahay, wayna kasii maseyreen arrintaas”.
Waxay Xaawo BBC-da u sheegtay in dacwaddeeda ay maxkamadda gaartay ayna maamulka ugu dambeyn muddo hal sano laga joogo ka gaareen go’aan ay uga mamnuuceen inay gaariga kaxeyso.
Xaawo Faarax Caad oo 69 jir ah ayaa in muddo ah ku nooleyd waddanka Australia, waxayna dad badan u arkaan inay ka mid tahay shakhsiyaadka horseedka u ah jaaliyadda Soomaaliyeed ee ku nool dalkaas.